Prefrontal accumbal catecholamine စနစ်သည်ဆုလာဘ်နှင့်မနှစ်မြို့ဖွယ်ဆက်စပ်လှုံ့ဆော်မှုနှစ်ခုလုံးအတွက်စိတ်ခွန်အားနိုးစေမှုအဓိကအားဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဆုံးဖြတ်သည်။ (2007) - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
Prefrontal accumbal catecholamines စနစ်ကဆုလာဘ်များနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက် related လှုံ့ဆော်မှုနှစ်ဦးစလုံးမှစိတ်ခွန်အားနိုး salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုဆုံးဖြတ်သည်။ (2007)
proc Natl Acad သိပ္ပံအမေရိကန်အေ 2007 မတ်လ 20; 104 (12): 5181-6 ။ EPub 2007 မတ်လ9။
Ventura R ကို, Morrone ကို C, Puglisi-Allegra အက်စ်
စန်တာလူစီယာဖောင်ဒေးရှင်းဦးနှောက်သုတေသန (CERC) အတွက်ဥရောပစင်တာ, မှတစ်ဆင့် del Fosso di Fiorano 65, 00143 ရောမမြို့, အီတလီ။ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
မကြာသေးမီကအထောက်အထားများအကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု medial prefrontal cortex နဲ့နျူကလိယ accumbens အပါအဝင်အတူတူပင်ဦးနှောက်ဧရိယာကိုထိခိုက်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ နျူကလိယ accumbens လှုံ့ဆော်မှုအဓိကတုံ့ပြန်ရန်လူသိများသော်လည်းမခွဲခြားဘဲမိမိတို့၏ hedonic valence ၏, ရွေးချယ်တိုးလာ dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်အတူနည်းနည်း reward- နှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်-related လှုံ့ဆျောမှုအတွက် prefrontal cortex ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအကြောင်းကိုသို့မဟုတ်ပါဝင် neurotransmitters အကြောင်းကိုလူသိများသည်။ ဤတွင်ကျွန်တော်ကြွက်၏ medial prefrontal cortex အတွက်ရွေးချယ် norepinephrine လျော့ကျအစားအစာ, ကင်း, ဒါမှမဟုတ် lithium chloride တို့ဖွငျ့သွေးဆောင်ခြင်းနှင့်နှစ်ဦးစလုံးလီသီယမ်အားဖြင့်သွေးဆောင်ရာအရပ်အေးစက်ချို့ယွင်းကြောင်းနျူကလိယ accumbens အားဖြင့် prefrontal cortex အားဖြင့် norepinephrine များလွှတ်ပေးရေးနှင့် dopamine တို့၏စီးပွါးကိုဖျက်သိမ်းပြီးကွောငျးတှေ့ ကလိုရိုက် (ခြင်းကိုမနှစ်သက်) နှင့်အစားအစာသို့မဟုတ်ကင်း (preference ကို) ။ ဒီအကြောင်း prefrontal cortical norepinephrine ဂီယာနျူကလိယအတွက် dopamine ၏မော်ဂျူမှတဆင့် reward- နှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်-related လှုံ့ဆော်မှုနှစ်ဦးစလုံးမှစိတ်ခွန်အားနိုး salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအဘို့လိုအပ်သက်သေအထောက်အထားများ, ရှိသမျှလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဦးနှောက်ဧရိယာ accumbens ဖြစ်ပါတယ်။
တိရစ္ဆာန်များအဖြစ်လူသားမြားသဆုလာဘ်ထွက်ရှာပြစ်ဒဏ်ရှောင်ရှားရန်တစ်ဦး propensity ရှိသည်။ ဤသည်ကိုရှင်းလင်းစွာသပ္ပါယ်အပြုအမူ, အကြိုးနှင့်ပြစ်ဒဏ်လှုံ့ဆော်မှု၏တန်ဖိုးကိုယ်စားပြုသူတို့ကိုအကြောင်းကိုဟောကိန်းများတည်ထောင်ရန်နှင့်အပြုအမူ (1) လမ်းပြ, ဤဟောကိန်းများသုံးစွဲဖို့စွမ်းရည်ပါဝငျသညျ။ စိတ်ခံစားမှု motivationally အဓိကအကြိုးသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု processing တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ဦးနှောက်ဒေသများလူသားတွေအတွက်မြောက်မြားစွာစိတ်ခံစားမှုလိုငွေပြမှုကိုနားလည်ရန်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်နိုင်သည်နားလည်ခြင်း "စစ်ကူ (ဆုလာဘ်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်) ကရူးနှမ်းပြည်နယ်များ" (2) အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ် Insofar အဖြစ်။
မကြာမီကဒေတာကြောင့်နျူကလိယ accumbens (NAc) နှင့် prefrontal cortex (PFC) နှစ်ဦးစလုံးအကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု (3-7) processing များအတွက်ဘုံအလွှာဖွဲ့စည်းဖော်ပြသည်။ Ventral striatum (သို့မဟုတ် NAc) ဂိုးညွှန်ကြားအပြုအမူများ၏စိတ်ခွန်အားနိုးထိန်းချုပ်မှုအခြေခံသတင်းအချက်အလက်များ processing တွင်ပါဝင်ပတ်သက်, လူ့နှင့်တိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ 3-8 (မသက်ဆိုင် valence ၏, နှစ်ဦးစလုံးအကြိုးနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု processing အတွက်ဒီဦးနှောက်ဧရိယာများအတွက်ယေဘုယျအခန်းကဏ္ဍကိုထောကျပံ့တာဖြစ်ပါတယ် ) ။
ထိုမှတပါး, သက်သေအထောက်အထား၏ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ် PFC တိုက်ရိုက်ရည်မှန်းချက်-ညွှန်ကြားအပြုအမူအတွက်ပါဝင်ပတ်သက်အဖြစ်ကိုထိခိုက်အပြောင်းအလဲနဲ့ (1, 9) တွင်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ NAc အတွက် dopamine ဂီယာအပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘော valence အတွက် shared "စိတ်ခွန်အားနိုး salience" လုပ်ငန်းစဉ် (3, 6) ပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အဆိုပြုပြီးပါပြီပေမယ်သို့သော်, ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် PFC ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်သည့် neurochemical အလွှာနေဆဲမသိရှိပါ။
PFC အတွက် Norepinephrine ဂီယာဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု (10, 11) ကများနှင့်ဆန္ဒရှိနှင့်အေးစက်စာစားချင်စိတ်ကိုလှုံ့ဆော်မှု (12, 13) က activated ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, medial PFC (mpFC) တွင် norepinephrine မကြာသေးမီက NAc အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရေးအပေါ်ပြောင်းလဲပစ်အရေးယူမှု (14, 15) မှတဆင့်တချို့လေ့နှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ရမည်ကိုပြသခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည် prefrontal cortical norepinephrine ဂီယာ motivationally အဓိကလှုံ့ဆော်မှုကို process မှ accumbal dopamine ပါဝငျကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ဤတွင်, ကြွက်ကိုအသုံးပြုပြီးကျနော်တို့ prefrontal cortical norepinephrine / mesoaccumbens dopamine စနစ်အားရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ထွက် set ကိုထိခိုက်အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆောင်သောလှုံ့ဆော်မှု processing တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဘုံအာရုံကြောအလွှာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့်ကျနော်တို့စိတ်ခွန်အားနိုး salience ၏ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု reward- နှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်-related လှုံ့ဆော်မှုရန်အဘို့အ mpFC အတွက် norepinephrine, အ dopaminergic mesolimbic system ပေါ်တွင်၎င်း၏ Module အရေးယူမှတဆင့်လိုအပ်သောရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။
အတှေ့အကွုံဆိုပေးထားလှုံ့ဆော်မှု (7) ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှု၏အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်သောကြောင့်ကျနော်တို့ကြိုးကသဘာဝ (အရေးပါတယ်လို့အစားအစာ, နို့ချောကလက်) နှင့် pharmacological (ကိုကင်း) လှုံ့ဆော်မှုနှင့်တစ်ဦးဆန္ဒရှိ pharmacological လှုံ့ဆော်မှု [lithium chloride တို့မှပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှု၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ် (LiCl)] prefrontal cortical norepinephrine နှင့် intracerebral microdialysis အားဖြင့် accumbal dopamine လွှတ်ပေးရန်ပေါ်မှာ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, norepinephrine prefrontal ဂီယာသည်ဤ motivationally အဓိကလှုံ့ဆော်မှုမှပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်တိုးလာ accumbal dopamine ထွက်သွားအုပ်ချုပ်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်, ငါတို့သည်လည်း NAc အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်နှင့်ပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင် mpFC အတွက် norepinephrine လွှတ်ပေးရေးအပေါ် mpFC အတွက်ရွေးချယ် norepinephrine တွေပျက်စီးမှုများ၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ် ဤအလှုံ့ဆော်မှုရန်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ချောကလက်နှင့်ကိုကင်းအားဖြင့်၎င်း, LiCl အားဖြင့်သွေးဆောင် conditional ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက် (တကြ် CPA) ရက်နေ့တွင်သွေးဆောင် conditional ရာအရပျ preference ကို (CPP က) တွင်ရွေးချယ် noradrenergic prefrontal ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏သက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ ကမူလတန်းဆုလာဘ်များနှင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များနှင့်သက်သေအထောက်အထား၏ကြီးမားသောခန္ဓာကိုယ်ကအခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်များတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောအတိုင်းအတာကြောင်းပြသသောကွောငျ့တွဲလှုံ့ဆော်မှုမှ Conditions အစာစားချင်စိတ်များနှင့်ဆန္ဒရှိဂုဏ်သတ္တိများ၏ဝယ်ယူများ၏အကဲဖြတ်ခွင့်ပြုဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဦးကနေရာအရပ်-အေးစက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဒီလေ့လာမှုအတှကျရှေးခယျြခဲ့ (3, 16) လှုံ့ဆော်မှုဖို့စိတ်ခွန်အားနိုး salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှု။
စမ်းသပ်မှု 1 ။
ကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိနှစ်ဦးစလုံးအဓိကလှုံ့ဆော်မှုမှပထမဦးဆုံးထိတွေ့ prefrontal norepinephrine နှင့် accumbal dopamine ထွက်သွားအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့, ငါတို့သည် intracerebral microdialysis အသုံးပြုပုံ mpFC အတွက် norepinephrine လွှတ်ပေးရန်နှင့် NAc အတွက် dopamine ထွက်သွားအပေါ်စနစ်တကျကင်းသို့မဟုတ် LiCl နဲ့ချောကလက်စားသုံးမှု၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်။ ထိုမှတပါး, cortical noradrenergic ဂီယာသည်ဤ motivationally အဓိကလှုံ့ဆော်မှုမှပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင် accumbal dopamine ထွက်သွားဘို့လိုအပ်ရှိမရှိသိရှိနိုင်ရန်ဖို့ကျနော်တို့ကိုကင်း, ချောကလက်နှင့် LiCl အားဖြင့်သွေးဆောင်အဆိုပါ accumbal dopamine တုံ့ပြန်မှုအပေါ်ရွေးချယ် noradrenergic ကွယ်ပျောက်သွားစေ၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်။ ကိုကင်း, ချောကလက်နှင့် LiCl, 200 မိမှာအလုပျသ 40 မိမှာ≈70% ၏တိုး, 120 မိမှာ≈100% နှင့်≈60% အထိအတုအယောင်-ကုသအုပ်စုများ mpFC အတွက် norepinephrine ထွက်သွားအတွက်အချိန်-မှီခိုတိုးထုတ်လုပ် အသီးသီး (ပုံ။ 1a) ။ ကိုကင်းတုံ့ပြန်အတွက် PFC အတွက်တိုးမြှင့် norepinephrine လွှတ်ပေးရန်ကျယ်ပြန့်အစီရင်ခံထားခဲ့သော်လည်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဤချောကလက်သို့မဟုတ် mpFC အတွင်းစနစ်တကျ LiCl မှပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင်တိုးလာ norepinephrine ထွက်သွား၏ပထမဦးဆုံးအစီရင်ခံစာကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားလှုံ့ဆော်မှုလည်းဒီဧရိယာမသက်ဆိုင်သူတို့ရဲ့ valence (1 ၏အဓိကလှုံ့ဆော်မှုများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍသောအမြင်နှင့်အတူသဘောတူညီချက်ထဲမှာအတုအယောင်-ကုသတိရစ္ဆာန်များ (ပုံ။ 3b) ၏ NAc အတွက် dopamine ထွက်သွားအတွက်အပြိုင်အချိန်-မှီခိုတိုးထုတ်လုပ် , 6) ။ mpFC အတွက် norepinephrine လွှတ်ပေးရန်ပေါ်မှာဤလျော့ကျ၏ဆိုးကျိုးများလည်းအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ Prefrontal norepinephrine ကွယ်ပျောက်သွားစေမယ့်ရွေးချယ်လွှာမှ inhibitor အားဖြင့် dopamine ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအပြီး mpFC အတွက် prefrontal cortical norepinephrine afferents (norepinephrine-ကုန်ခမ်းအုပ်စုများ) ၏ရွေးချယ် neurotoxic ကွယ်ပျောက်သွားစေခြင်းဖြင့်ရရှိသောခဲ့သည်။ ဤနည်းလမ်းကိုနီးပါးထိခိုက် dopamine ၏တစ်ရှူးအဆင့်ဆင့်စွန့်ခွာ, norepinephrine ၏တစ်ရှူးအဆင့်ဆင့်၏လေးနက်လျော့ကျ (≈90%) ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ထိန်းချုပ်ရေးတိရိစ္ဆာန်များ (အတုအယောင်-ကုသအုပ်စုများ) အ norepinephrine-ကုန်ခမ်းကြွက်ကဲ့သို့တူညီသောကုသမှုအကြောင်းမဲ့ပေမယ် intracerebral မော်တော်ယာဉ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ။ အောက်ပါအတိုင်း (Norepinephrine တစ်ရှူးအဆင့်ဆင့်ခဲ့ကြသည်: အတုအယောင်-ကုသအုပ်စု 698 ± 26 ng / g စိုစွတ်သောတစ်ရှူး; norepinephrine-ကုန်ခမ်းအုပ်စု 63 ± 17 ng / g စိုစွတ်သောတစ်ရှူးအောက်ပါအတိုင်း Dopamine တစ်ရှူးအဆင့်ဆင့်ခဲ့ကြသည်: အတုအယောင်-ကုသအုပ်စု 203 ± 18 ng / g စိုစွတ်သောတစ်ရှူး; ။ norepinephrine-ကုန်ခမ်းအုပ်စု 189 ± 16 ng / g စိုစွတ်သောတစ်ရှူး)
NAc အတွက် mpFC နှင့် dopamine အတွက် extracellular norepinephrine အပေါ် prefrontal cortical norepinephrine ကုန်ခမ်း။ ဆားနှင့်ထိုးသွင်းအတုအယောင်ကုသသို့မဟုတ် norepinephrine - ကုန်ခမ်းတိရိစ္ဆာန်များ၏ NAc အတွက် mpFC (က) နှင့် dopamine (DA) တွင် extracellular norepinephrine (NE), (ပိုမို ... )
ဒါဟာသိသိသာသာ NAc (အတုအယောင်-ကုသအုပ်စု 1 ± 1.35 pg နှုန်းအတွက် Basal extracellular dopamine မထိခိုက်ခဲ့ဘူးပေမယ့် mpFC အတွက်ရွေးချယ် norepinephrine ကွယ်ပျောက်သွားစေခြင်း, accumbal dopamine အတွက်တိုးခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ချောကလက်နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်သွေးဆောင် prefrontal cortical norepinephrine လွှတ်ပေးရေး (ပုံ။ 0.15) ချို့ယွင်း 20 μl; norepinephrine-ကုန်ခမ်းအုပ်စု 1.29 ± 0.18 pg နှုန်း 20 μl) သို့မဟုတ် mpFC (အတုအယောင်-ကုသအုပ်စု Basal extracellular norepinephrine, 1.31 ± 0.18 pg နှုန်း 20 μl; norepinephrine-ကုန်ခမ်းအုပ်စု 1.26 ± 0.17 pg နှုန်း 20 μl) ။ တစ်ဦးချင်းစီအုပ်စု mpFC အတွက် NAc နှင့် norepinephrine ၏ dopamine ၏ပျမ်းမျှ Basal တန်ဖိုးများ [ဆား, ကိုကင်း (20 / ကီလိုဂရမ် mg), LiCl (3 meq / ကီလိုဂရမ်) နဲ့ချောကလက်] သိသိသာသာကွာခြားခဲ့ပါဘူး
ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုအရှင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စိတ်ခွန်အားနိုး salience အတွက်၎င်း၏အဓိကအခန်းကဏ္ဍအကြံပြုခြင်း, mpFC အတွင်းနဂိုအတိုင်း noradrenergic ဂီယာ NAc အတွင်းကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ရာဆွများအတွက်လိုအပ်သောအခွအေနေကြောင်းဖော်ပြသည်။
စမ်းသပ်မှု2။
norepinephrine prefrontal ဂီယာမူလတန်းဆုလာဘ်များနှင့်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူတွဲလှုံ့ဆော်မှုဖို့အေးစက်အစာစားချင်စိတ်များနှင့်ဆန္ဒရှိဂုဏ်သတ္တိများလေးလည်းများအတွက်လိုအပ်သောရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်, ငါတို့အရပ်ဌာနအေးစက်အပေါ်ရွေးချယ် prefrontal norepinephrine တွေပျက်စီးမှုများ၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်။
Prefrontal noradrenergic လျော့ကျ cocaine- နဲ့ချောကလက်-သွေးဆောင် CPP ကအဖြစ် LiCl အားဖြင့်သွေးဆောင်တကြ် CPA နှစ်ဦးစလုံးကိုဖျက်သိမ်းပြီး။ ထို့ကြောင့်အတုအယောင်-ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတွက် cocaine- သို့မဟုတ်ချောကလက်-တွဲအခန်းနှင့် LiCl-တွဲအခန်း (ပုံ။ 2a) မှသိသိသာသာခြင်းကိုမနှစ်သက်များအတွက်သိသာထင်ရှားသော preference ကိုပြသပေမယ့်, norepinephrine-ကုန်ခမ်းတိရိစ္ဆာန်များအခန်း (ပုံဖြစ်စေမ preference ကိုပြသသည်။ 2b ) ။
နေရာအေးစက်အပေါ် prefrontal cortical norepinephrine ကွယ်ပျောက်။ အစားအစာစားသုံးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ (နို့ချောကလက် ၁ ဂရမ်၊ အတုအယောင်ကုသမှုအုပ်စု၊ n = 1; norepinephrine deplet group, n = 8) နှင့်ဆား (Sal) ကိုစနစ်တကျဆေးထိုးခြင်း (Sal) (အတုအယောင်ကုသမှုအုပ်စု၊ (နောက်ထပ်…))
ပဏာမစမ်းသပ်ချက်ငါတို့သည်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီနှင့်အတုအယောင်-ကုသတိရစ္ဆာန်များ၏တကြ် CPA နှစ်ဦးစလုံးရင်တော့မှားမယ်တိရစ္ဆာန်များ၏ရှိသူများထံမှချွတ်စွပ်အရွယ်အစားဖြစ်ကြောင်းလေ့လာတွေ့ရှိသတိပြုပါ။ နှစ်ဦးစလုံးအခန်းအတွက်ဆားတွဲဖက်မှုကြုံတွေ့ခဲ့ကွောငျးတိရစ္ဆာန်များမသက်ဆိုင်သည့်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်အခြေအနေ (အတုအယောင်ကုသသို့မဟုတ် norepinephrine ကုန်ခမ်း) ၏အခန်းတစ်ခုခုကိုမ preference ကိုပြသခဲ့သည်။ ကိုကင်း, ချောကလက်, ဒါမှမဟုတ် LiCl နဲ့ကုသ norepinephrine-ကုန်ခမ်းတိရိစ္ဆာန်များ၏အမူအကျင့်သင်တန်းပေးခြင်းကာလအတွင်းသာယာဉ်ဖြေရှင်းချက်ကြုံတွေ့ကြောင်းတိရစ္ဆာန်များနှင့်ဆင်တူရှိ၏ ဆိုလိုသည်မှာသူတို့အခန်းတစ်ခုခုကိုမ preference ကိုပြသခဲ့သည်။
ဤတွင်ကျနော်တို့ NAc အတွက် dopamine ၏မော်ဂျူမှတဆင့် cortical norepinephrine ဂီယာ prefrontal ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားသတင်းပို့, reward- နှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်-related လှုံ့ဆော်မှုနှစ်ဦးစလုံးမှစိတ်ခွန်အားနိုး salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုများအတွက်လိုအပ်သောအခြေအနေဖြစ်ပါသည်။
ကြိုတင်အတွေ့အကြုံကိုဆိုပေးထားလှုံ့ဆော်မှု (7) ၏စိတ်ခွန်အားနိုးသက်ရောက်မှု၏အဓိကပစ်မှတ်ဖြစ်သောကြောင့်ပထမဦးစွာကျနော်တို့ intracerebral microdialysis အသုံးပြုပုံပထမဆုံးစနစ်တကျကင်းသို့မဟုတ် LiCl မှထိတွေ့မှုအဖြစ် norepinephrine သို့မဟုတ် dopamine အပေါ်ချောကလက်စားသုံးမှု၏သက်ရောက်မှု၏သက်ရောက်မှုအကဲဖြတ် အသီးသီး mpFC နှင့် NAc အတွက်လွှတ်လိုက်ပါ။ ကိုကင်း, ချောကလက်နှင့် LiCl အချိန်-မှီခိုအဆိုပါ accumbal dopamine အတွက်တိုးအဖြစ်အတုအယောင်-ကုသအုပ်စုများ၏ prefrontal norepinephrine ထွက်သွားအတွက်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ norepinephrine လျတ်၏တစ်ဦးကသိသိသာသာတိုးချောကလက်ကိုလက်ခံရရှိ၏ 20 မိအတွင်းအတုအယောင်-ကုသတိရိစ္ဆာန်များ၏ mpFC အတွက်ထင်ရှားရှိ၏ လျှံစီးနောက်ပိုင်းတွင်အခြေခံအဆင့်ဆင့်မှပြန်လာသောနှင့်ကြီးမားသောစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည်။ mpFC အတွက် norepinephrine ၏ဤ biphasic ချောကလက်-သွေးဆောင်တိုးတလျှောက်လုံး NAc အတွက် dopamine တို့၏စီးပွါး Parallel မပြုခဲ့သော်လည်း, ကနဦးတိုးအရေးပါတယ်လို့အစားအစာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့် NAc အတွက် dopamine ၏တိုးဖွယ်ရှိဆက်စပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဒုတိယကြီးမားများပြားလာရှာဖွေနေခြင်းနှင့်အစားအစာဆုလာဘ် (17) တည်နေရာနှင့်ဆက်စပ်သော Spatial သတင်းအချက်အလက် processing များအတွက်လိုအပ်သော cortical arousal တစ် neurochemical Correlate ကိုယ်စားပြုပေလိမ့်မည်။ တကယ်တော့သူကတိုးလာ norepinephrine ထွက်သွားမြင့်မားတဲ့စိတ်ခွန်အားနိုး salience (17) နဲ့လှုံ့ဆော်မှု၏ရှေ့မှောက်တွင်အချက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ ရဟန်းတို့ဤသို့လျှင်ဤတိုးလာ norepinephrine ထွက်သွားနောက်ထပ်အရေးပါတယ်လို့များစားစရာဘို့ရှာဖွေလိုအပ်သောရွေးချယ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုခွင့်ပြုစေခြင်းငှါ, နှင့်အစားအစာနှင့်အတူတွဲလှုံ့ဆော်မှုမှ Conditions အစာစားချင်စိတ်ဂုဏ်သတ္တိများ၏ဝယ်ယူအတွက်အကူအညီပေးပါလိမ့်မယ်။ သို့သော် norepinephrine အပေါ်အစားအစာစားသုံးမှု၏ postingestive သက်ရောက်မှုထွက်အုပ်ချုပ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
ကိုကင်းမှတုန့်ပြန်ကြိုးသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုနှင့် PFC အတွက်တိုးမြှင့် norepinephrine လွှတ်ပေးရန်အားဖြင့်သွေးဆောင် NAc အတွက်တိုးမြှင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်ကျယ်ပြန့်အစီရင်ခံခဲ့ကြပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာဤချောကလက်ထိတွေ့မှုသို့မဟုတ် mpFC အတွင်း LiCl အားဖြင့်သွေးဆောင်တိုးလာ norepinephrine ထွက်သွား၏ပထမဦးဆုံးအစီရင်ခံစာကိုဖြစ်ပါတယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ကျနော်တို့ prefrontal cortical noradrenergic ဂီယာသည်ဤ motivationally အဓိကလှုံ့ဆော်မှုမှပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှုအားဖြင့်သွေးဆောင် accumbal dopamine ထွက်သွားဘို့လိုအပ်သောကြောင်းဤနေရာတွင်ပြသပါ။ တကယ်တော့အဲဒီလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင် prefrontal norepinephrine နှင့် accumbal dopamine ထွက်သွားနှစ်ဦးစလုံးမရှိသိသိသာသာတိုး, norepinephrine-ကုန်ခမ်းကြွက်တွေမှာထင်ရှားခဲ့သည်။ mpFC အတွက် Norepinephrine ventral tegmental ဧရိယာ dopamine ဆဲလ် (18, 19) နှင့် / သို့မဟုတ် corticoaccumbal glutamatergic Project (20) မှတဆင့် excitatory prefrontal cortical projection မှတဆင့် mesoaccumbens dopamine လွှတ်ပေးရေးကိုသက်ဝင်ပေလိမ့်မည်။ ဒီနျူကလိယ NAc အတွက်တိုးမြှင့် dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့် ventral tegmental ဧရိယာ dopamine အာရုံခံ (21-23), ကိုသက်ဝင်ပြထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ထိုမှတပါး, တစ်ဦး excitatory သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအားထုတ်အတွက် locus coeruleus မှ PFC စီမံကိနျးအတှကျတစ်အခန်းကဏ္ဍမျှော်မှန်းနိုင်ပါသည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုယခင်အစီရင်ခံစာများနှင့်အတူသဘောတူညီချက်အတွက်ခြွင်းချက်မရှိကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုနှစ်ဦးစလုံး mpFC (10-15) တွင် norepinephrine ထွက်သွားအဖြစ် NAc အတွက် dopamine လွှတ်ပေးရေး (3, 24) တိုးမြှင့်ပြသခဲ့ကြသည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့, သို့သော်, သူတို့ mpFC အတွင်းနဂိုအတိုင်း noradrenergic ဂီယာကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိ pharmacological နှင့် NAc အတွင်းသဘာဝအလျောက်လှုံ့ဆော်မှုနှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့်သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ရာဆွများအတွက်လိုအပ်သောအခွအေနေကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်သူတို့ prefrontal norepinephrine ထောက်ပြ နှင့်သူ၏ activation ခြွင်းချက်မရှိကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်ဖွယ်ရှိစိတ်ခွန်အားနိုး salience တစ်အလွှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အာရုံကြောစနစ်ကအဖြစ် accumbal dopamine ဂီယာ။ ဒီအမြင် prefrontal norepinephrine cocaine- အပေါ်ကွယ်ပျောက်သွားစေ, chocolate-, ဒါမှမဟုတ် LiCl-သွေးဆောင်ရာအရပျအေးစက်၏ဆိုးကျိုးများအပေါ်အပြုအမူစမ်းသပ်ချက်ကနေရလဒ်တွေကိုကထောက်ခံသည်။
ထို့ကြောင့်ဤလေ့လာမှု၏ဒုတိယအရေးကြီးသောတွေ့ရှိချက်ကြောင့် prefrontal cortical norepinephrine လျော့ကျနှစ်ဦးစလုံး CPP ကကိုကင်းသို့မဟုတ်အစားအစာများကသွေးဆောင်ခြင်းနှင့်တကြ် CPA LiCl အားဖြင့်သွေးဆောင်ချို့ယွင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ LiCl-တွဲအခန်းဖို့ cocaine- သို့မဟုတ်ချောကလက်-တွဲအခန်းနှင့်သိသိသာသာခြင်းကိုမနှစ်သက်များအတွက်သိသာထင်ရှားသော preference ကိုပြသအတုအယောင်-ကုသတိရိစ္ဆာန်များသော်လည်း, norepinephrine-ကုန်ခမ်းတိရိစ္ဆာန်များ, အရှင်နဂိုအတိုင်း prefrontal cortical norepinephrine ဂီယာလိုအပ်သောကြောင်းဆန္ဒပြ, အခန်းတစ်ခုခုကိုမ preference ကိုပြသ မူလတန်းအကြိုးသို့မဟုတ်နေရာတစ်နေရာ-အေးစက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်ဆန္ဒရှိဖြစ်ရပ်များနှင့်အတူတွဲလှုံ့ဆော်မှုမှ conditional ဂုဏ်သတ္တိများ၏ဝယ်ယူဘို့။
ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကို prefrontal cortical norepinephrine-ကုန်ခမ်းကြွက်တွေအတွက်, အကြိုးမှထိတွေ့မှုနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှု (ကိုကင်း, အစားအစာ, သို့မဟုတ် LiCl, ခြွင်းချက်မရှိနှိုးဆွ) ကသွေးဆောင် norepinephrine လွှတ်ရာမရှိခြင်းစဉ်အတွင်း conditional လှုံ့ဆော်မှု (Spatial ပုံစံ) ကိုစိတ်ခွန်အားနိုး salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုတားဆီး, ထိုညွှန်ပြ တွဲဖက်မှုအစည်းအဝေးများ။ ဒါ့အပြင်ယခင်ကပြထားတဲ့အတိုင်း norepinephrine-ကုန်ခမ်းတိရိစ္ဆာန်များတစ် passive ရှောင်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းတာဝန် (15) သင်ယူခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ (14) နဲ့ဆက်စပ်ပေါင်းသင်းနိုင်စွမ်းသက်သေပြကြောင့်ကြောင်း prefrontal norepinephrine လျော့ကျအသင်းသို့မဟုတ် mnemonic ဖြစ်စေဖြစ်စဉ်များနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်ဘူးသတိပြုပါ။ သို့သော်နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေး prefrontal cortical norepinephrine-ကုန်ခမ်းတိရစ္ဆာန်များ၏ချို့ယွင်း၏တိကျသောသဘောသဘာဝကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
NAc အတွင်း Dopaminergic ဂီယာ (ပြန်လည်သုံးသပ် ref ။ 25 ကိုကြည့်ပါ) ဆုလာဘ်သို့မဟုတ်သင်ယူဆုလာဘ်အချို့ရှုထောင့်များ၏ hedonic သက်ရောက်မှုပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်စဉ်းစားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောအမြင် (3) နဲ့သဘောတူညီချက်ထဲမှာ NAc အတွက် dopamine ဂီယာနှစ်မျိုးလုံးအပြုသဘောနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူအတွက်အခန်းကဏ္ဍကြောင်းပြသ; အရေးအကြီးဆုံးကတော့, သို့သော်, သူတို့ကဒီစိတ်ခွန်အားနိုးဖြစ်စဉ်ကို prefrontal cortical norepinephrine ခြင်းဖြင့်အုပ်ချုပ်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ တကယ်တော့ရွေးချယ် prefrontal norepinephrine လျော့ကျအရှင်မော်ဂျူမှတဆင့်, ထို noradrenergic prefrontal ဂီယာသရုပ်ပြ, cocaine- သို့မဟုတ်ချောကလက်-သွေးဆောင်ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီနှင့်နှစ်ဦးစလုံး LiCl-သွေးဆောင်တကြ် CPA နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်တွင်ဤအဓိကလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်သွေးဆောင် NAc အတွက် dopamine လွှတ်ရာချွတ်ယွင်း၏ပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုထုတ်လုပ် NAc အတွင်း dopamine လွှတ်ပေးရေး, reward- နှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်-related လှုံ့ဆော်မှုနှစ်ဦးစလုံး၏စိတ်ခွန်အားနိုးအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်လိုအပ်သောအခြေအနေဖြစ်ပါသည်။
အတူတူယူ, အမူအကျင့်များနှင့် microdialysis စမ်းသပ်ချက်ကနေပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကိုကြောင်း prefrontal norepinephrine ဂီယာနှစ်မျိုးလုံး reward- မှယခင်လေ့လာမှုများ (14, 15) ကအကြံပြုသည်အတိုင်း, လေ့နှိပ်စက်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများ mediates, ဒါပေမယ့်စိတ်ခွန်အားနိုး salience ထည့်သွင်းတွက်ချက်မှုအဘို့လိုအပ်မသာကိုသရုပ်ပြနှင့် ခြင်းကိုမနှစ်သက်-related လှုံ့ဆော်မှုနောက်ထပ်စွဲလမ်းမူးယစ်ဆေးအဖြစ်ဆန္ဒရှိ pharmacological လှုံ့ဆော်မှု, သဘာဝလှုံ့ဆော်မှုကဲ့သို့တူညီသော neurobiological ယန္တရား exploit ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်း။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာအားလုံးလှုံ့ဆော်မှုအပြုအမူတွေ (3, 6, 26) တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ "salience သည့်စနစ်" အဖြစ် mesolimbic dopaminergic စနစ်ညွှန်ပြကြောင်းယခင်တွေ့ရှိချက်များတိုးချဲ့။ သူတို့ကအစဒီစနစ်, အရှင်ကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုသည့် CNS (7) တွင်အလားတူလမ်းကြောင်းကိုထိခိုက်သောအမြင် supporting, norepinephrine prefrontal cortical ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
သူတို့ processing ကြိုးများနှင့်ဆန္ဒရှိနှစ်ဦးစလုံးအဓိကလှုံ့ဆော်မှုအတူတူပင်ဦးနှောက်ဧရိယာများပါဝင်ကြောင်းပြသသောကွောငျ့ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုဆုလာဘ်များနှင့်ခြင်းကိုမနှစ်သက်၏ neurobiology အပေါ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေး; ဆိုလိုသည်မှာသူတို့တစ်တွေဘုံအာရုံကြောစနစ်ကအဖြစ် noradrenergic နှင့် accumbal dopaminergic ဂီယာ prefrontal ထောက်ပြ။ အကျိုးသက်ရောက်စေကြိုးသို့မဟုတ်ဆန္ဒရှိလှုံ့ဆော်မှုနှင့်၎င်းတို့၏မော်လီကျူးယန္တရားများအားဖြင့် activated အဆိုပါ neurotransmitter စနစ်များကိုအပြုသဘောပါဝင်ပတ်သက်အာရုံကြောစနစ်များလုပ်ငန်းဆောင်တာအဖြစ်အပျက်သဘောဆောင်သောစိတ်ခံစားမှု elucidating များအတွက်အခြေခံများကိုကူညီပေးပါမည်ကိုနားလည်ခြင်း.
လေ့ neurobehavioral phenotyping အတွက်အသုံးပြုကြသည်သော inbred C57BL / 6JIco strain (ချားလ်စ်မြစ် Laboratories, ဝီလ်မင်တန်, MA) ၏အထီးကြွက်, ထိုစမ်းသပ်ချက်၏ထိုအချိန်ကဟောင်း 8-9 ရက်သတ္တပတ်ယခင်ကဖော်ပြထား (14, 15) အဖြစ်သျောခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုစမ်းသပ်အုပ်စုတစ်စုခြောက်လမှရှစ်တိရစ္ဆာန်များ၏ပါဝင်သည်။ အားလုံးစမ်းသပ်ချက်သုတေသနအတွက်တိရိစ္ဆာန်များ၏အသုံးပြုမှုကိုအုပ်ချုပ်အီတလီအမျိုးသားရေးဥပဒေ (Decreto ဥပဒေပြုခြင်းမရှိ။ 116, 1992) နဲ့အညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။
Chloral ဓါတ်ကိုပြန်လည်, 6-hydroxydopamine (6-OHDA), GBR 12909, ကိုကင်း Hydrochloride နှင့် LiCl Sigma-Aldrich (စိန့်လူးဝစ်, MO ကို) မှဝယ်ယူခဲ့သည်။ ကိုကင်း (20 / ကီလိုဂရမ် mg), LiCl (3.0 / ကီလိုဂရမ် meq), chloral ဓါတ်ကိုပြန်လည် (350-450 / ကီလိုဂရမ် mg), နှင့် GBR 12909 (15 / ကီလိုဂရမ် mg) ဆား (0.9% NaCl) အတွက်ဖျက်သိမ်းနှင့်တစ်ဦးအတွက် ip ထိုးသွင်းခဲ့ကြ 10 ml / kg အသံအတိုးအကျယ်။ 6-OHDA ဆိုဒီယမ် metabisulfite (0.1 မီတာ) ပါဝင်တဲ့ဆားအတွက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။ အစားအစာစမ်းသပ်ချက်အဘို့, အကျိုးကိုနို့ချောကလက် (; နက်စ်, Vevey, ဆွစ်ဇာလန် 1 ဂရမ်) ဖြစ်ခဲ့သည်။
တိရစ္ဆာန်များမောက် adapter နဲ့တပ်ဆင်ထားကာ stereotaxic ဘောင် (ဒါဝိဒ်သည် Kopf တူရိယာ, Tujunga,, CA) တွင်တပ်ဆင်ထားနှင့်လမ်းညွှန် cannula (သံမဏိ, 450 မီလီမီတာ၏ရိုးအပြင်ဘက်အချင်းတွေနဲ့တဖက်သတ်ထဲထညျ့, (0.38 / ကီလိုဂရမ် mg) chloral ဓါတ်ကိုပြန်လည်နှင့်အတူ anesthetized ခဲ့ကြသည် ; mpFC တွင်သို့မဟုတ် NAc (14, 15) တွင်သတ္တု AB, စတော့ဟုမ်း, ဆွီဒင်) ။ လမ်းညွှန် cannula ၏အရှည် 1 NAc များအတွက် mpFC နှင့် 4.5 မီလီမီတာအဘို့အမီလီမီတာဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါလမ်းညွှန် cannula epoxy ကော်အတူ fixed ခဲ့ပါတယ်နှင့်ပါးစပ်တွင်းဘိလပ်မြေနောက်ထပ်တည်ငြိမ်ဘို့ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ [အများစု shell ကို subdivision (27) အပါအဝငျ] NAc များအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက် mpFC နှင့် + 2.52 anteroposterior နှင့် 0.6 များအတွက် + 1.60 anteroposterior နှင့် 0.6 နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အောက်ပါအတိုင်း [Franklin နှင့် Paxinos ၏နည်းလမ်းများ (27) အရတိုင်းတာ] bregma ထံမှသြဒီနိတ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအာကာသယာဉ် (Dialysis အမြှေးပါး NAc များအတွက် mpFC နှင့်2မီလီမီတာအဘို့အ 1 မီလီမီတာအရှည်နှင့် 0.24 မီလီမီတာ, MAB4cuprophane microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေး၏အပြင်ဘက်အချင်း; Metal AB) microdialysis စမ်းသပ်ချက်မတိုင်မီ 24 ဇစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များပေါ့ပေါ့လမ်းညွှန် cannula သို့ microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေး၏လက်စွဲသွင်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန် chloral ဓါတ်ကိုပြန်လည် (350 mg / kg) နဲ့ anesthetized ခဲ့ကြသည်။ တိရိစ္ဆာန်များကသူတို့အိမ်ပြန်လှောင်အိမ်မှပြန်လာသောခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါထွက်ပေါက်နှင့်ဝင်ပေါက်စုံစမ်းစစ်ဆေး Tube ဒေသအလိုက် Parafilm လျှောက်ထားဖြင့်ကာကွယ်ထားခဲ့သည်။ ပြန်လည်နာလန်ထူအတည်ပြုရန်အသုံးပြုမှုကိုရှေ့တော်၌ထိုနေ့၌: အဆိုပါအမြှေးပါး dopamine နဲ့ norepinephrine (ဎ = 10.7;; norepinephrine, 0.82 ± 12.2% dopamine, 0.75 ± 20% အောက်ပါအတိုင်းဆွေမျိုးပြန်လည်နာလန်ထူခဲ့) ၏အတွင်းစသည်တို့နာလန်ထူမှုအတွက်စမ်းသပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ microdialysis စုံစမ်းစစ်ဆေး PE 100 tubing (Metalant AB) နှင့်အလွန်ပါးလွှာသော torque dual-channel အရည်ဆုံလည် (model 20 / D / 375QM; Instech Laboratories, Plymouth Meeting) မှတစ်ဆင့် CMA / 22 စုပ်စက် (ဆွီဒင်၊ Carnegie ဆေးတက္ကသိုလ်၊ ဆွီဒင်) မှချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ PA) လွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားခွင့်ပြုရန်။ Artificial cerebrospinal fluid (၁၄၇ မီလီမီတာ NaCl / ၁ မီလီမီတာ MgCL / ၁.၂ မီလီမီတာ CaCl147 / 1 mM KCl) ကိုကျောက်ကပ်ဆေးကြောစစ်ဆေးခြင်းမှတစ်ဆင့် 1.2 μl / min နှုန်းဖြင့်ပုံမှန်စီးဆင်းသည်။ စမ်းသပ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေရာချထားပြီးနောက် 2-4 ဇထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ တိရိစ္ဆာန်တစ်ခုစီကို microdialysis ပစ္စည်း (Instech Laboratories) နှင့်အိမ်လှောင်အိမ်အိပ်ရာခင်းကြမ်းပြင်ရှိလှည့်လည်နေသောလှောင်အိမ်ထဲတွင်ထားရှိသည်။2နာရီအကြာတွင် Dialysis perfusion စတင်ခဲ့သည်။ ကျောက်ကပ်ဆေးကြောခြင်းအစမှအဆုံးတွင်ကြွက်များကို samples22 ဇ samples အနေဖြင့်နမူနာနမူနာများစုဆောင်းခြင်းမတိုင်မှီတားဆီးနိုင်ခဲ့သည်။ ကုသမှုမတိုင်မီချက်ချင်းကောက်ယူခဲ့သောနမူနာသုံးမျိုး၏ပျမ်းမျှအာရုံစူးစိုက်မှုကို (<24% အပြောင်းအလဲ) ကို Basal concentration အဖြစ်ယူသည်။ microdialysis စမ်းသပ်မှုမစတင်မီကြွက်များကိုအုပ်စုတစ်စုအတွင်း (ဆား၊ ကိုကင်း၊ ချောကလက်သို့မဟုတ် LiCl) အမျိုးမျိုးသောကုသမှုတစ်ခု (အတုအယောင်ကုသမှုသို့မဟုတ် norepinephrine ကုန်ခမ်းသွားခြင်း) ကိုတာဝန်ပေးခဲ့သည်။ အစားအစာနှင့်စမ်းသပ်မှုများအတွက်တိရစ္ဆာန်များကိုစမ်းသပ်မှုမစတင်မီ ၄ ရက်အလိုတွင်အစားအစာချို့တဲ့ခြင်းအစီအစဉ် (၂၈) တွင်ထားခဲ့သည်။
Dialysate တိုင်း (ကိုကင်းနှင့်အ LiCl အုပ်စုများအတွက်) 20 များအတွက် 120 မိသို့မဟုတ် 160 (အစားအစာအုပ်စုများအတွက်) မိနစ်စုဆောင်းခဲ့သည်။ တစ်ဦးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နေရာချ cannula နှင့်အတူကြွက်တွေကနေမှသာလျှင် data တွေကိုအစီရင်ခံတင်ပြနေကြပါတယ်။ နေရာချထားမှုကို methylene အပြာရောင်အစွန်းအထင်းများကတရားစီရင်ခြင်းကိုခံရကြ၏။ အဆိုပါ dialysate နမူနာနှစ်ဆယ် microliters HPLC အားဖြင့်သုံးသပ်ခဲ့ကြသည်။ ကျန်ရှိနေသေးသော 20 μlဖြစ်နိုင်တဲ့နောက်ဆက်တွဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့သိုထားခဲ့ပါတယ်။ ပြင်းအား (pg နှုန်း 20 μl) အာကာသယာဉ်ပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်တညျ့မခံခဲ့ရပါ။ တစ်ဦးအေးစက်ဆဲလ် (M 5200) နှင့်တစ်ဦးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဆဲလ် (M 5021) နဲ့ထောက်ပံ့; အဆိုပါ HPLC စနစ်ကတစ်ဦးမဟာမိတ်အဖွဲ့ HPLC စနစ် (ရေ, Milford, MA) နှင့်တစ်ဦး coulometric detector (Coulochem II ကို, ESA, Chelmsford, MA မော်ဒယ် 5011A) ၏ပါဝင်သည် ။ အဆိုပါအေးစက်ဆဲလ် 400 MV မှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်, လျှပ်ကူးပစ္စည်း 1 200 MV မှာသတ်မှတ်ထားခဲ့နှင့်လျှပ်ကူးပစ္စည်း2-250 MV မှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ တစ်ဦးက Nova-Pack ကို C18 ကော်လံ (3.9 × 150 မီလီမီတာ; ရေ) အသုံးပြုခဲ့သည် 33 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါစီးဆင်းမှုနှုန်းကို 1.1 ml / မိနစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခင်က (14, 15) ဖော်ပြထားသကဲ့သို့မိုဘိုင်းအဆင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ assay ထောက်လှမ်းန့်သတ်ချက် 0.1 pg ဖြစ်ခဲ့သည်။
mpFC အတွက် Norepinephrine ကွယ်ပျောက်သွားစေ။
မေ့ဆေးနှင့်ခွဲစိတ်ထားအထက်တွင်ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ တိရစ္ဆာန်များ dopaminergic အာရုံခံကာကွယ်ပေးရန် 12909-OHDA microinjection မတိုင်မီ GBR 15 (30 မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်)6မိနှင့်အတူထိုးသွင်းခဲ့ကြသည်။ 6-OHDA ၏နှစ်နိုင်ငံအပြန်အလှန်ဆေးထိုး (1.5 နှုန်း 0.1 μgတစ်ဦးချင်းစီအခြမ်းဘို့2မိဘို့μl) တစ်ဦးသံမဏိမှတဆင့် [သြဒီနိတ် bregma (2.52) မှရိုသေလေးစားမှုနှင့်အတူ + 0.6 anteroposterior, ± 2.0 နှစ်ဦးနှစ်ဖက်နှင့် -27 ventral ခဲ့ကြသည်] mpFC သို့ခဲ့ cannula (0.15 မီလီမီတာ၏အပြင်ဘက်အချင်း; Unimed, Lausanne, ဆွစ်ဇာလန်) က polyethylene ပြွန်က 1-μlပြွတ်နဲ့ချိတ်ဆက်ကာ CMA / 100 စုပ်စက်တို့ကမောင်းနှင်။ အဆိုပါ cannula အဆိုပါပြုတ်ရည်၏အဆုံးအပြီးတစ်ဦးအပိုဆောင်း2မိဘို့ရာအရပျ၌ကနျြခဲ့သညျ။ အတုအယောင်-ကုသတိရိစ္ဆာန်များအတူတူကုသမှုအကြောင်းမဲ့ပေမယ် intracerebral မော်တော်ယာဉ်ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ တိရစ္ဆာန်များ7ရက်ပေါင်းခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက် microdialysis သို့မဟုတ်အပြုအမူစမ်းသပ်ချက်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။
mpFC အတွက် Norepinephrine နှင့် dopamine တစ်ရှူးအဆင့်ဆင့်တွေပျက်စီးမှု၏အတိုင်းအတာအကဲဖြတ်ဖို့ယခင်ကဖော်ပြထား (14, 15) အဖြစ်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။
အမူအကျင့်စမ်းသပ်ချက်အရပျ-အေးစက်ယန္တရား (14, 15, 29) ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါယန္တရားနှစ်ခုကိုမီးခိုးရောင် Plexiglas အခန်းများ (15 × 15 × 20 စင်တီမီတာ) ဖွဲ့စည်းကာဗဟိုလမ်းကြား (15 ×5× 20 စင်တီမီတာ) ။ နှစ်ဦးကလျှောတံခါးများ (4 စင်တီမီတာ× 20) အခန်းဖို့လမ်းကြားချိတ်ဆက်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းနှစ်ခုတြိဂံ parallelepipeds (5 ×5× 20 စင်တီမီတာ) အနက်ရောင် Plexiglas ထားနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံများ (အမြဲအခနျး၏တူညီသောမျက်နှာပြင်ကိုဖုံးအုပ်ထား) မှာစီစဉ်ပေးအေးစက်လှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တိရစ္ဆာန်များ7ရက်ပေါင်းခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်အမူအကျင့်စမ်းသပ်ချက်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အေးစက်မီ, ကြွက်အုပ်စုတိုင်းအတွင်းကွဲပြားခြားနားသောကုသမှု (ဆား, ကင်း, ချောကလက်, ဒါမှမဟုတ် LiCl) ၏တဦးတည်း (အတုအယောင်ကုသသို့မဟုတ် norepinephrine ကုန်ခမ်း) မှတာဝန်ကျတယ်။
နေရာအရပ်အေးစက်များအတွက်လေ့ကျင့်ရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းယခင်က (14, 15) ဖော်ပြထားခဲ့သည်။ အတိုချုပ်, နေ့ 1 (pretest) ရက်နေ့မှာကြွက် 20 မိဘို့တစ်ခုလုံးကိုယန္တရားစူးစမ်းဖို့လွတ်ကြ၏။ အောက်ပါ 8 ရက်ပေါင်း (အေးစက်အဆင့်) စဉ်အတွင်းကြွက်နှစ်ခုအခန်းများ၏တဦးတည်းအတွက်တနည်း 40 မိဘို့နေ့စဉ်သွားလာခဲ့ကြသည်။ pharmacological လှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူရာအရပ်ကိုအေးစက်အဘို့, ပုံစံများတဦးတည်းတသမတ်တည်းဆားနှင့်အတူတွဲခဲ့ကင်းနှင့်အတူအခြားအေးစက်အဆင့်ကာလအတွင်းသို့မဟုတ် LiCl (20 meq / ကီလိုဂရမ် ip, တကြ် CPA) (3.0 / ကီလိုဂရမ် ip, ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ mg) ။ ဤရွေ့ကားဆေးများ C57BL / 6JIco ကြွက် 20 တစ်ဦးကိုကင်းထိုးမှာပိုမိုအားကောင်း CPP က / / ကီလိုဂရမ် (30, 31) Mg နှင့် 3.0 meq တစ် LiCl ထိုးမှာတကြ် CPA စမ်းသပ်မှုအတွက်ခြင်းကိုမနှစ်သက်ဆီသို့တစ်ဦးလမ်းကြောင်းသစ်ဖော်ပြရန်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းယခင်လေ့လာမှုများ၏အခြေခံပေါ်မှာရွေးချယ်တော်မူခဲ့သည် ကီလိုဂရမ် (32) ။ ထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတွင်တိရစ္ဆာန်များအဘို့, နှစ်ဦးစလုံးအခန်းများဆားနှင့်အတူတွဲခဲ့ကြသည်။ အစားအသောက်နှင့်အတူချင်းတိုးတက်ရေးပါတီအဘို့, ပုံစံများတဦးတည်းတသမတ်တည်းစံအစားအစာ (mouse ကိုစံအစားအစာ၏ 1 ဂရမ်) နှင့်အတူတွဲခဲ့အရေးပါတယ်လို့အစားအစာ (နို့ချောကလက်၏ 1 ဂရမ်) နှင့်အတူအခြား။ အဆိုပါတိရိစ္ဆာန်များအေးစက်စတင် 28 ရက်ပေါင်းရှေ့တော်၌အစာအာဟာရ-ကန့်သတ်အချိန်ဇယား (4) အပေါ်ထားရှိခဲ့ကြသည်။ ဤသည်အချိန်ဇယားကိုအေးစက်တစ်လျှောက်လုံးကြာခဲ့သည်။
အားလုံးသောနေရာ - အေးစက်စေသောစမ်းသပ်မှုအားလုံးအတွက်တွဲဖက်မှုမျှမျှတတရှိခြင်းကြောင့်စမ်းသပ်အုပ်စုတစ်ခုစီ၏ထက်ဝက်အတွက်ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှု (ကိုကင်း၊ ချောကလက်သို့မဟုတ် LiCl) တို့သည်ပုံစံနှစ်မျိုးနှင့်တွဲစပ်ခဲ့သည်။ အုပ်စုတစ်ခုစီ၏အခြားတစ်ဝက်တွင်ခြွင်းချက်မရှိလှုံ့ဆော်မှုကိုအခြားပုံစံနှင့်တွဲဖက်ထားသည်။ CPP သို့မဟုတ် CPA ၏ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုကိုစမ်းသပ်ခြင်းကိုရက် ၁၀ ရက်တွင် pretest လုပ်ထုံးလုပ်နည်းကို အသုံးပြု၍ စစ်ဆေးသည်။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို EthoVision အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဗီဒီယိုခြေရာခံခြင်းစနစ် (Noldus, Wageningen, The Netherlands) မှစုဆောင်းပြီးဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အတိုချုပ်, စမ်းသပ်စနစ်ကို CCD ဗွီဒီယိုကင်မရာဖြင့်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ထို့နောက် signal ကို digit frame တစ်ခု (frame grabber ဟုခေါ်သော hardware device ဖြင့်) ပြီးကွန်ပျူတာ၏ memory ထဲသို့လွှဲပြောင်းသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဒီဂျစ်တယ်အချက်အလက်များကိုဘာသာရပ်တစ်ခုစီ၏ကဏ္ sector တစ်ခုစီ၏ ဦး စားပေးရမှတ်များအတွက်ကုန်ကြမ်းဒေတာအဖြစ်အသုံးပြုသော“ အချိန်ကုန်” (စက္ကန့်အတွင်း) ကိုရယူရန် EthoVision ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့်ဆန်းစစ်သည်။
နေရာအရပ်-အေးစက်စမ်းသပ်ချက်အဘို့, စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း (စက္ကန့်) အချိန်ကိုတွက်ချက်ခြင်းဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်စမ်းသပ်မှုနေ့၌အခန်း (စင်တာ), မူးယစ် / ချောကလက်-တွဲ (တွဲဆက်ခြင်း) စင်တာအတွက်သုံးစွဲနှင့်ဆား / စံအစားအစာ-တွဲ (Unpaired) ။ နှစ်ဦးစလုံးအခန်းနှင့်အတူဆားတွဲဖက်မှုလက်ခံရရှိတိရိစ္ဆာန်များ၏ဖြစ်ရပ်မှာအတူတွဲအခန်းပေးသောသူတို့ထိတွေ့ခဲ့သည်မှပထမဦးဆုံးတစ်ဦးအဖြစ်ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
နေရာအရပ်အေးစက်အပေါ်ရွေးချယ် prefrontal cortical norepinephrine တွေပျက်စီးမှုများ၏သက်ရောက်မှုများ။
နေရာအရပ်-အေးစက်စမ်းသပ်ချက်ကနေဒေတာကိုအချက်အကြားတစ်ဦးနှင့်အတူထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ ANOVA အသုံးပြု. ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြ (pretreatment နှစ်ခုအဆင့်ဆင့်: အတုအယောင်ကုသနှင့် norepinephrinedepleted) နှင့်အချက်အတွင်းတဦးတည်း (တွဲဖက်မှု, သုံးအဆငျ့: စင်တာ, အတူတွဲနှင့် Unpaired) တစ်ဦးချင်းစီကုသမှုများအတွက် [ ဆား / ဆား, ဆား / ကိုကင်း (20 / ကီလိုဂရမ် mg), ဆား / LiCl (3 meq / ကီလိုဂရမ်), နှင့်စံအစားအစာ / ချောကလက်] ။ အရေးကြီးနှိုင်းယှဉ် pair နဲ့ Unpaired အခန်းအကြားရှိသူများဖြစ်ကြသည်သောကြောင့်ဤအခန်းသုံးစွဲအချိန်အတောအတွင်းနှိုင်းယှဉ်အုပ်စုတိုင်းအတွင်းထပ်ခါတလဲလဲ-အစီအမံ ANOVA အသုံးပြု. လုပ်ခဲ့ကြသည်။
Two-way ANOVA သည်သိသိသာသာကြိုတင်ကုသမှုကိုက်ကိုကင်းအတွက်အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှုကိုဖော်ပြသည်။ [F (2, 28) = 3.47; : P <0.05], LiCl [F ကို (2, 28) = 4.55; : P <0.05] နှင့်ချောကလက် [F (2, 28) = 3.5; : P <0.05] ။
အုပ်စုတစ်ခုစီမှထပ်ခါတလဲလဲ - တိုင်းတာမှုများ ANOVA သည်ကိုကင်းဖြင့်ထိုးသွင်းသောအတုအယောင်ကုသသည့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်တွဲဖက်မှုအချက်၏သိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြခဲ့သည် [F (၁, 1) = 14; : P <24.3] LiCl [F ကို (0.0005, 1) = 14; : P <10.3], ဒါမှမဟုတ်ချောကလက် [F (0.01, 1) = 14; : P <7.31] ။
mpFC ရှိ dopamine နှင့် norepinephrine ၏တစ်သျှူးအဆင့်များအပေါ် prefrontal norepinephrine လျော့နည်းသွားမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုနှစ်ဖက်စလုံး ANOVA မှဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်များမှာတွေ့ရှိရပါသည် (တွေ့ရှိချက်နှစ်ခု - အတုအယောင်ကုသမှုနှင့် norepinephrine ကုန်ခမ်း) နှင့်စမ်းသပ်မှု (အဆင့်နှစ်ခု - အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုနှင့် microdialysis စမ်းသပ်ချက်များ) ။ Duncan ၏မျိုးစုံစမ်းသပ်မှုကို post-hoc test ဖြင့်သင့်လျော်သောအခါအုပ်စုအချင်းချင်းအပြန်အလှန်နှိုင်းယှဉ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းအပြုအမူနှင့် microdialysis စမ်းသပ်ချက်ကနေဒေတာတွေကိုအပေါ်ထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်။ mpFC ရှိ dopamine နှင့် norepinephrine တစ်ရှူးအဆင့်များ၌ prefrontal norepinephrine လျော့ကျမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် Two-way ANOVA သည် [n (p, ၁၊ ၁၈၈) = ၂.၀၂ သာဖြစ်သည်။ : P <1] ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမစမ်းသပ်သက်ရောက်မှု။
စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းသည်ကုန်ကြမ်းဒေတာများ (၂၀ μlလျှင် pg ၏ပြင်းအား) ကိုတွက်ချက်သည်။ prefrontal norepinephrine လျော့နည်းသွားမှု၏ mpFC တွင် norepinephrine ထုတ်လွှတ်မှုသို့မဟုတ်ကိုကင်း (၂၀ မီလီဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) နှင့် LiCl (၃ ကီလိုဂရမ် / ကီလိုဂရမ်) ဖြင့်စိန်ခေါ်သောတိရစ္ဆာန်များ၏ NAc တွင် dopamine စီးဆင်းမှုအပေါ်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအချက် (၂) ခုနှင့်အတူ ANOVA ကို ထပ်မံ၍ တိုင်းတာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အဆင့်သုံးဆင့်၊ အတုအယောင်ကုသမှုနှင့် norepinephrine ကုန်ခန်းသွားခြင်းနှင့်အဆင့်သုံးဆင့်၊ ဆား၊ ကိုကင်းနှင့် LiCl) နှင့်အချက် (အတွင်း၊ အဆင့်ခုနစ်ဆင့်၊ ၀၊ ၂၀၊ ၄၀၊ ၆၀၊ ၈၀၊ ၁၀၀ နှင့် ၁၂၀) တွင်အဆင့်တစ်ခုရှိသည်။ prefrontal norepinephrine လျော့နည်းသွားမှု၏ mpFC တွင် noppinephrine ဖြန့်ချိခြင်းသို့မဟုတ်ချောကလက်နှင့်ထိတွေ့သောတိရစ္ဆာန်များ၏ NAc တွင် dopamine စီးဆင်းမှုအပေါ်တွင်အကျိုးသက်ရောက်မှုကို ANOVA မှအချက်တစ်ချက် (ကြိုတင်ကုသမှု၊ အဆင့်နှစ်ဆင့်၊ အတုအယောင်ကုသမှုနှင့် norepinephrine ကုန်ခမ်းခြင်း) နှင့်အချက်တစ်ချက်အတွင်းမှအချက်တစ်ချက် (ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း) အချိန်ကိုးအဆင့်ဆင့်, 20, 20, 3, 0, 20, 40, 60, 80 နှင့် 100) ။ ရိုးရှင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုအချိန်ကာလတစ်ခုစီအတွက်တစ်လမ်းတည်းဖြင့် ANOVA မှအကဲဖြတ်သည်။ Duncan ၏မျိုးစုံစမ်းသပ်မှုကို post-hoc test ဖြင့်သင့်လျော်သည့်အခါအုပ်စုတစ်ခုအကြားနှိုင်းယှဉ်မှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
prefrontal norepinephrine ထွက်သွားအပေါ် pharmacological လှုံ့ဆော်မှုများ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းသိသိသာသာကြိုတင်ကုသမှု×ကုသမှု×အချိန်အပြန်အလှန်ဖော်ပြ [F (12, 180) = 4.98; : P <0.005] ။ norepinephrine လွှတ်ပေးမှုအပေါ်ချောကလက်စားသုံးမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းတစ်ကြိုတင်ကုသမှု×အချိန်အပြန်အလှန်ဖော်ပြ [F (8, 80) = 7.77; : P <0.005] ။ ရိုးရှင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများကအတုအယောင်ကုသမှုခံယူသောအုပ်စုနှင့်အချိန်ကာလ၏သိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြသည်။ ကိုကင်းသို့မဟုတ် LiCl ဆေးထိုးပြီးနောက်နှင့်ချောကလက်စားသုံးပြီးနောက်တွင်အတုအယောင်ကုသမှုနှင့် norepinephrine - ကုန်ခမ်းနေသောအုပ်စုများအကြားသိသာသောကွာခြားချက်ကိုဖော်ပြသည်။
accumbal dopamine စီးဆင်းမှုအပေါ် pharmacological လှုံ့ဆော်မှု၏သက်ရောက်မှုများအတွက်စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းသိသိသာသာကြိုတင်ကုသမှု×ကုသမှု×အချိန်အပြန်အလှန်ဖော်ပြ [F (12, 180) = 10.02; : P <0.0005] ။ ချောကလက်အချက်အလက်များ၏စာရင်းအင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းသိသာထင်ရှားသောကြိုတင်ကုသမှု×အချိန်အပြန်အလှန်ဖော်ပြ [F (8, 80) = 2.12; : P <0.05] ။ ရိုးရှင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများကအတုအယောင်ကုသသည့်အုပ်စုများအတွက်သာအချိန်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါး (ကိုကင်းသို့မဟုတ် LiCl) ဆေးထိုးပြီးနောက်နှင့်ချောကလက်စားသုံးပြီးနောက်တွင်အတုအယောင်ကုသမှုနှင့် norepinephrine - ကုန်ခမ်းနေသောအုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွာခြားမှုကိုဖော်ပြခဲ့သည်။
ကျနော်တို့လိမ္မာအကူအညီအတွက်ဒေါက်တာအီး Catalfamo ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါဟာသုတေသန Ministero della Ricerca Scientifica အီး Tecnologica (PRIN 2005), Università ", La Sapienza" Ateneo (2004 / 2005), နှင့် Ministero della နှုတ်ဆက် (Progetto Finalizzato RF03.182P) ကထောက်ခံခဲ့သည်။
CPP ကအေးစက်သောအရပ် preference ကို
တကြ် CPA အေးစက်သောအရပ်ခြင်းကိုမနှစ်သက်
6-OHDA 6-hydroxydopamine ။
ဤဆောင်းပါးသည်တစ်ဦး PNAS တိုက်ရိုက်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
1. O'Doherthy ဂျေ Curr Opin Neurobiol ။ 2004; 14: 769-776 [PubMed] ။
2 ။ Rolls ET ။ ဦးနှောက်သိပ္ပံပြုမူနေ။ 2000; 23: 177-191 [PubMed] ။
3 ။ Berridge KC, ရော်ဘင်ဆင် TE ။ ဦးနှောက် Res ဗျာ 1998; 28: 309-369 [PubMed] ။
4 ။ Becerra L ကို, Breiter HC, ပညာရှိ R ကို, Gonzalez RG, Borsook ဃအာရုံခံ။ 2001; 32: 927-946 [PubMed] ။
5. Gottfried JA, O'Doherthy J, Dolan RJ ။ J ကို Neurosci ။ 2002; 22: 10829-10837 [PubMed]
6 ။ Jensen J ကို, Mcintosh AR, Crawley က AP, Mikulis DJ သမား, Remington ထဲ၌အလင်းကိုထွန်းလင်း, Kapur အက်စ်တွင် neuron ။ 2003; 40: 1251-1257 [PubMed] ။
7 ။ Borsook: D, Becerra L ကို, Carlezon WA, Jr က Shaw က M, Renshaw P ကို, Elman ငါ Levine ဂျေ EUR J ကိုနာကျင်မှု။ 2007; 11: 7-20 [PubMed] ။
8 ။ ငါသည်ပညာရှိ၏ဟု R. နတ်ဗြာ neuroscience ။ 2004; 5: 483-494 [PubMed] ။
9 ။ Bechara တစ်ဦးက, Tranel: D, Damasio အိပ်ချ်ဦးနှောက်။ 2000; 123: 2189-2202 [PubMed] ။
10 ။ McQuade R ကို, Creton D ကိုစတန်းဖို့ဒ် SC ။ Psychopharmacology ။ 1999; 145: 393-400 [PubMed] ။
11 ။ Dazzi L ကို, Seu အီး, Cherchi, G, Biggio G. အ EUR J ကို Pharmacol ။ 2003; 476: 55-61 [PubMed] ။
12 ။ Feenstra MGP, Teske, G, Botterblom MHA, က de Bruin JP ။ neuroscience လက်တ။ 1999; 272: 179-182 [PubMed] ။
13 ။ Mingote S က, က de Bruin JPC, Feenstra MGP ။ J ကို neuroscience ။ 2004; 24: 2475-2480 [PubMed] ။
14 ။ Ventura R ကို, Cabib S က, Alcaro တစ်ဦးက, Orsini ကို C, Puglisi-Allegra အက်စ်ဂျေ neuroscience ။ 2003; 23: 1879-1885 [PubMed] ။
15 ။ Ventura R ကို, Alcaro တစ်ဦးက, Puglisi-Allegra အက်စ် Cereb Cortex ။ 2005; 15: 1877-1886 [PubMed] ။
16 ။ di Chiara, G, Bassareo V ကို, Fenu S က, De Lucas, MA, Spina L ကို, Cadoni ကို C, Acquas အီး, Carboni အီး, Valentini V ကို, Lecca ဃ Neuropharmacology ။ 2004; 47: 227-241 [PubMed] ။
17 ။ Aston-ဂျုံးစ်, G, Rajkowski J ကို, Cohen ကိုဂျေ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု။ 1999; 46: 1309-1320 [PubMed] ။
18 ။ ရှီ WX, ပန်း CL, Zhang က XX, ဂျုံးစ် MD, Bunney BS ။ J ကို neuroscience ။ 2000; 20: 3504-3511 [PubMed] ။
19 ။ Sesack SR, Pickel VM က။ J ကို comp Neurol ။ 1992; 320: 145-160 [PubMed] ။
20 ။ Darracq L ကို, Drouin ကို C, Blanc, G, Glowinski J ကို, Tassin JP ။ neuroscience ။ 2001; 103: 395-403 [PubMed] ။
21 ။ ဂျူဒို, E, ချင်းမိုင်ကို C, Aston-ဂျုံးစ် G. အအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 1998; 83: 63-79 [PubMed] ။
22 ။ Grenhoff J ကို, Nisell M က, Ferre S က, Aston-ဂျုံးစ်, G, Svensson TH ။ J ကိုဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Transm ။ 1993; 93: 11-25 ။
23 ။ Liprando LA က, Miner LH, Blake RD, Lewis က DA, Sesack SR ။ synapses ။ 2004; 52: 233-244 [PubMed] ။
24 ။ Salamone JD ကော်ရဲရားက M, Mingote S က, Weber နဲ့ SM ။ J ကို Pharmacol Exp Ther ။ 2003; 305: 1-8 [PubMed] ။
25 ။ Everitt BJ, Robbins TW ။ နတ် neuroscience ။ 2005; 11: 1481-1487 [PubMed] ။
26 ။ Horvitz JC ။ ပြုမူနေဦးနှောက် Res ။ 2002; 137: 65-74 [PubMed] ။
27 ။ Franklin KBJ, Paxinos G. အမောက်ဦးနှောက်: Stereotaxic Coordinates ၌။ San Diego မှ: ပညာရေးဆိုင်ရာ; 1997 ။
28 ။ Ventura R ကို, Puglisi-Allegra အက်စ် synapses ။ 2005; 58: 211-214 [PubMed] ။
29 ။ Cabib S က, Orsini ကို C, Le Moal က M, Piazza PV ။ သိပ္ပံ။ 2000; 289: 463-465 [PubMed] ။
30 ။ Romieu P ကို, ဖန် VL မာတင်-Fardon R ကို, Maurice တီ Neuropsychopharmacology ။ 2002; 4: 444-455 [PubMed] ။
31 ။ Orsini ကို C, Bonito-Oliva တစ်ဦးက, Conversi: D, Cabib အက်စ် Psychopharmacology ။ 2005; 181: 327-336 [PubMed] ။
32 ။ မြင့်တက် fo, Cunningham CL ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျးပြုမူနေ။ 2000; 1: 17-24 [PubMed] ။